Shonin, igwefoto nke ga - eme ka obi dị anyị mma | Akụkọ akụrụngwa
Shonin, igwefoto nke ga - eme ka anyị nwee nchebe
Nchebe, n'ụzọ ọ bụla, bụ otu n'ime nchegbu kachasị n'ụwa taa. N'ihi ịntanetị na ọha mmadụ jikọtara ọnụ, ejirila ekwentị mkpanaka iji dekọọ ihe mberede okporo ụzọ, mata ndị omekome ma ọ bụ naanị debe ndekọ ọdịyo nke ihe omume ndị bụ akụkụ nke akụkọ ntolite.
Kpọmkwem iji mee ka echiche a sikwuo ike video ndekọ dị ka ihe akaebe, na ọbụna ime ka anyị nwee mmetụta nke ịnọ ná ntụkwasị obi karị ma igbochi ndị omempụ Site na nkwupụta ya, ọrụ igwefoto ọhụrụ nke onwe gị na-akpata mmetụta na Kickstarter. N'ezie, Shonin, nke ahụ bụ otu esi akpọ ngwa ọrụ ọhụrụ a, ga-achọkwa ndị nwere ya iji ezi uche na ọrụ.
Otu obere igwefoto onwe ya iji dekọọ ihe na-eme n'ihu anyị
Shonin na-bụ Obere “igwefoto onwe onye” na anyị nwere ike idowe na uwe elu uwe elu ma ọ bụ na mpụga nke n'akpa uwe idekọ ihe niile na-eme n'ihu anyị anya. Ke adianade do, ya were dị nnọọ mfe na ngwa ngwa n'ihi na dị nnọọ pịa otu bọtịnụ na igwefoto ga-amalite ndekọ.
Ihe “ọhụụ” ọhụrụ a, dịka anyị siri kwuo, nwere ike ịba uru bara uru n’ụfọdụ ọnọdụ, ọkachasị ndị a na-atụghị anya ya dịka mwakpo, ihe mberede okporo ụzọ, ọgụ ọgụ n'okporo ụzọ, nwekwara ike bụrụ ngwa ọrụ bara uru maka ụfọdụ ọrụ, ọkachasị ndị nta akụkọ A ga-agbasa ihe ndekọ dị ndụ ma ọ bụ bugoo n'igwe ojii na oge (maka ụdị nke nwere nkwado kaadị SIM), ma ọ bụ ọ ga-ebugo ya na igwe ojii ahụ ozugbo ọ jikọọ na netwọk WiFi. N'ihi ya, "ihe akaebe" ahụ ga-adị mma.
Mana dịka ọ nwere ike ịba uru dị ukwuu, ndị ọrụ kwesịrị ịza ajụjụ maka ndekọ ha yana, karịa ihe niile, yana mgbasa ozi ha, ebe enwere ike izobe Shonin ma jiri ya mee ihe abụghị ezigbo ebumnuche.
Igwefoto Shonin bụ mgbochi mmiri ọ nwere ike ịdekọ ihe ruru awa abụọ na ọkara nke vidiyo na otu ụgwọ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ inweta otu ị nwere ike ime ya ebe a maka ọnụahịa na-amalite na $ 149. N’ezie, nwee ndidi n’ihi na mbubata agaghị amalite rue Febụwarị 2018.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Shonin, igwefoto nke ga - eme ka anyị nwee nchebe
Mgbe oge nke atọ nke ndị ala ọzọ na-akwadoro, nke atọ nke Narcos ga-amalite
Samsung Galaxy Note 8 abịala, nke a bụ ihe ị chọrọ ịma